टाइगरले तोडे दिशासँगको ३ वर्षदेखिको सम्बन्ध, यस्तो छ कारण !
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जनटाइगरले तोडे दिशासँगको ३ वर्षदेखिको सम्बन्ध, यस्तो छ कारण !
बलिउड अभिनेता टाइगर श्राफ अभिनेत्री दिशा पटानीसँगको सम्बन्धलाई लिएर अत्यधिक चर्चामा छन् । आफ्नी गर्लफ्रेन्ड दिशाका साथमा डेट गरिरहेका टाइगर पछिल्लो समय उनीसँग देखिएका छैनन् । यसको पछाडि ठूलै रहस्य रहेको भारतीय मिडियाले खुलाएका छन् ।
खबरका अनुसार ३ वर्ष अघिदेखि एक–अर्कासँग सम्बन्धमा रहेका यी जोडीले अब ब्रेकअप लिएका छन् । भारतीय मिडियाले जनाएअनुसार पछिल्लो केही दिनदेखि यी दुईमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसका कारण यी दुईले आफ्नो सम्बन्धमा पूर्णविराम लगाएका हुन् ।
भारतीय खबर साइट लाइफ डटकमका अनुसार यी जोडीले आफ्नो सम्बन्ध जोगाउन हर–कोशिस गरेको भएपनि उनीहरु असफल भएका छन् । र, उनीहरुले अब सम्बन्ध अगाडि नबढाउने फैसला लिएका छन् ।
हाल दुबैसँग ठूला–ठूला प्रोजेक्ट हातमा छन् र दुबै आफ्नो कामलाई ध्यान दिन चाहन्छन् । टाइगर पछिल्लो सयम आफ्नो आउँदो फिल्म ‘स्टुडेण्ट अफ द इयर २’ को छायांकनमा व्यस्त छन् भने दिशा पटानी सलमान खानको ‘भारत’ मा व्यस्त छिन् ।
टाइगरले दिशासँगको सम्बन्धलाई अहिलेसम्म मिडियामा स्वीकार गरेका थिएनन् । दुबैले ‘बाघी २’ मा साथमा काम गरेका थिए र यहीँ फिल्मबाट दर्शकले यी दुईको जोडीलाई खुबै रुचाएका थिए । धेरैले सोचेका पनि थिएनन् कि यी दुईको सम्बन्ध यति छिट्टै सकिन्छ भन्ने ।
धेरैले यी दुईको सम्बन्धको अन्त्य हुनुमा टाइगरको आउँदो फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’ की कोस्टार तारालाई हेरेका छन् । बलिउडमा खबर यो पनि छ कि तारा र टाइगर पछिल्ला दिनमा फोनमा धेरै समय बिताउँछन् । दुबैबीच यो सिलसिला घण्टौंसम्म रहन्छ । यी बीचमा साँच्चै केही छ ? अब यो कुरा टाइगर र तारालाई मात्र थाहा होला । के ताराकै लागि टाइगरले दिशासँगको सम्बन्ध तोडेका हुन् त ? यो भने स्पष्ट हुन बाँकी नै छ ।